I-Air Canada ikulungele ukuqhagamshela kwakhona iCanada kunye ne-US ukuya kuthi ga kwi-220 yeenqwelomoya zemihla ngemihla
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Air Canada ikulungele ukuqhagamshela kwakhona iCanada kunye ne-US ukuya kuthi ga kwi-220 yeenqwelomoya zemihla ngemihla
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ishedyuli yezorhwebo yase-Canada inokuhlengahlengiswa njengoko kufuneka ngokusekwe kwi-COVID-19 trajectory kunye nezithintelo zikarhulumente.
Uninzi lweeshedyuli ezinqamlezileyo zomda waseKhanada naseMelika zixhasa ezoqoqosho zombini.
Ishedyuli yangoku yehlobo iAir Canada ibandakanya iindlela ezingama-55 kunye neendawo ezingama-34 zokuya eUnited States
I-Air Canada App eyenza ukuba abathengi baskene ngokukhuselekileyo, balayishe kwaye baqinisekise iziphumo zovavanyo ze-COVID-19 ezandisiweyo kuzo zonke iinqwelomoya ezisuka e-US zisiya eCanada.
Air Canada namhlanje ibhengeze ishedyuli yayo yangoku ye-trans-border equka iindlela ezingama-55 kunye neendawo ezingama-34 e-US, ukuya kuthi ga kwi-220 yeenqwelo moya mihla le phakathi kwe-US ne Canada. Ishedyuli entsha iyahambelana nokukhululwa kwezithintelo kuhambo phakathi kwala mazwe mabini ukusukela nge-9 ka-Agasti ka-2021, eyenza ukuba kugonywe ngokupheleleyo abantu baseMelika ukuba bangene eCanada kukhenketho olungabalulekanga kunye nokususwa kweemfuno zeehotele ezivalelweyo, iimfuno zovavanyo ezikhululekileyo ezivumela abantu baseCanada ukuba bathathe ixesha elifutshane. Ukuhamba kwemida yokuwela ngaphantsi kweeyure ezingama-72 ukwenza iimvavanyo zabo zokungena eCanada, phakathi kwamanye amanyathelo okunciphisa izithintelo.
“Ukuphungulwa kwezithintelo zokuhamba ezibhengezwe namhlanje ngurhulumente wobumbano linyathelo elibalulekileyo elisekwe kwinzululwazi, kwaye sonwabile kakhulu ukwakha ngokutsha uthungelwano lwethu lwe Canada-US. I-Canada kunye ne-United States babelana ngamaqhina asondeleyo kunye nokubuyisela unxibelelwano lomoya kuya kuba negalelo ekuphuculweni kwezoqoqosho kuwo omabini la mazwe. Air CanadaIsiko elizingcayo lokuba lelona lizwe liphethe ilizwe liphela e-US libonakalisiwe kwishedyuli yethu ephuhlisiweyo yokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha kubathengi kuwo omabini la mazwe, ukubhenela abathengi baseCanada abanomdla wokuya kwiindawo ezidumileyo zase-US, nase-US. abahlali bajonge ukutyelela kwaye baphonononge iindawo ezintle zaseKhanada kunye nokubuka iindwendwe. Ishedyuli yethu ikwenza ukuba kube lula ukuhamba phambili ukuya kwiiToronto, eVancouver naseMontreal hubs ukuya nokubuya kwiindawo zethu zehlabathi. Siceba ukubuyisela iinkonzo kuzo zonke iindawo zase-US ezingama-57 ezazifudula zinikezelwa ngaphambili ngokweemeko ezivumayo. Sijonge ngokunyanisekileyo ekwamkeleni abathengi bethu, ”utshilo uMark Galardo, uSekela Mongameli oPhezulu, uCwangciso lweNethiwekhi kunye noLawulo lweNgeniso eAir Canada.
"Siyavuya kakhulu ngesi sibhengezo kwaye sijonge phambili ekwamkeleni abahambi abavela e-US," utshilo uMarsha Walden, uMongameli kunye ne-CEO ye-Destination Canada. “Ukusuka kwizixeko zethu ezidlamkileyo ezibhaptiziweyo kwindalo ukuya entlango entle kunye nonxweme ukuya kwimibala eyahlukileyo yeenkcubeko zemveli kunye nehlabathi, yonke imihla eCanada inikezela nge-adventure entsha kunye nethuba lokuphinda uqhagamshele kunye nokubalulekileyo. Iqela laseCanada lilungele ukwamkela abahlobo bethu baseMelika! ”
Isisombululo esitsha sedijithali esisebenzisa iAir Canada App senza lula uxwebhu olunxulumene neemfuno ze-COVID-19
I-Air Canada iphuhlise isisombululo esitsha sedijithali nge-Air Canada App, evumela abathengi ukuba babhabhe ukusuka e-US baye eCanada naphakathi kweCanada kwaye bakhethe iindawo zaseYurophu ukuze bahlole ngokulula nangokukhuselekileyo kwaye balayishe iziphumo zovavanyo ze-COVID-19 ukuqinisekisa ukuthotyelwa kweemfuno zikarhulumente zokuhamba ngaphambi ukufika kwisikhululo seenqwelomoya.